जिल्ला नटुक्रयाई कुरा मिल्दैन:विजयकुमार गच्छदार
सहमतिको वातवरण टुट्न नदिन सत्तापक्षले जुन ढंगले सहिष्णुता र सौहार्दता देखाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो देखाउन सकेन ।
बैठक स्थगित गरेपछि भौतिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने र नेताहरूमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास भयो जुन गलत थियो । राम्रो भएन ।
मधेसकै केही साथीहरूले चर्को कुरा उठाएपछि प्रचण्डजी फेरि अघि बढ्न सक्नुभएन ।
मधेसी मोर्चाभित्र संघीयताका विषयमा सहमति हुने अवस्था मैले देखिनँ । आज पनि म देख्दिनँ । संघीयतामा एक मत भएर जान सकिँदैन ।
माघ ८ अघि सहमति नहोस् र सहमतिले संविधान नबनोस् भनेर चाहने तत्त्व
प्रत्येक पार्टीभित्र भएको मैले प्रस्टसँग देखेको थिएँ ।
एक मधेस, एक प्रदेश असम्भव कुरा हो । दुइटा प्रदेशमा पनि मिल्ने सम्भावना देखिएको छैन ।
सत्तापक्षले वार्ता गर्दैनौं भन्न मिल्छ ? सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग कुरै नगर्ने दुनियाँमा कहीँ हुन्छ ?
संंविधान निर्माणको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । माघ ११ गते दुई तिहाइको समर्थनमा संविधानसभाले संविधानका विवादित विषयलाई बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंग्याउन प्रश्नावली बनाउन प्रस्ताव समिति घोषणा गरेपछि सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चाबीच ध्रुवीकरण झनै बढेको छ । यद्यपि विपक्षी मोर्चामा रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ल्याएको मध्यमार्गी प्रस्ताव यतिबेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिर चर्चामा छ । यही सेरोफेरोमा कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपाने र गंगा बीसीले गच्छदारसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
माघ ५ र ८ गते सहमति भएको हो भने पनि हुन्छ । संविधानका विवादित चारवटा विषयमा सहमति जुटाउन सबैभन्दा गाह्रो पर्ने संघीयताको ढाँचा नै थियो । त्यसभित्र पनि सीमांकन र नाममा बढी विवाद थियो । संघीयतामा आदिवासी जनजाति र मधेसी नेताहरूलाई चित्त बुझाउने गरी टुंग्याउनुपर्ने थियो । मैले प्रचण्डजीसँग यसबारेमा धेरैपटक कुराकानी पनि गरेको थिएँ । प्रचण्डजीलाई मैले भनेको थिएँ- शासकीय स्वरूप टुंग्याउँदा कांग्रेसको चित्त बुझाउनुपर्छ । अहिले कांग्रेस मात्रै पनि छैन, एमाले पनि सँगै छ । कांग्रेसले वेस्टमिन्स्टर प्रणालीका लागि ६० वर्षदेखि लड्दै आएको छ । वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा कांग्रेसको मान्यता मात्रै होइन, राजनीतिक आस्था र विश्वास पनि हो । त्यसैले संसदीय प्रणाली उसले छाड्दैन । तपाईंहरूले अघि सारेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली पनि तपाईंहरूको मान्यता र नीति हो । दुवैले अडान नछाड्ने हो भने 'डेड लक' हुन्छ भनेको थिएँ । माघ ५ मा फरक मत राखेर भए पनि शासकीय स्वरूपलाई प्रक्रियामा लैजाने जुन प्रस्ताव प्रचण्डजीले राख्नुभयो, त्यसको डेढ महिनाअघि नै मलाई भन्नुभएको थियो । 'अरू मिलेमा फरक मत राखेर संविधान घोषणा गर्नेमा जान्छु, अहिले नभन्नु' भनेर मलाई त्यतिबेलै भन्नुभएको हो । त्यही बुझेर कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग शासकीय स्वरूपमा कुरा मिल्छ, संघीयतामा तपाइर्ंहरू लचक हुनुपर्छ भनेर कुरा राख्दै आएको थिएँ । माघ ५ गते प्रचण्डजीले मुख खोलेपछि तीन वटा विषयमा सहमति नै बनेको थियो ।
प्रचण्डजीले १० बाट ९ जान सकिने बताउनुभएको थियो । प्रदेश सभालाई नाम राख्न दिंदा ९ प्रदेश र बहुजातीय नाम दिएर जाँदा ६ प्रदेशमै सहमति गर्न सकिने प्रचण्डजीले बताइसक्नुभएको थियो । सत्तापक्षले ल्याएको सात प्रदेशको बनोटमा हुबहु हामी -विपक्षी मोर्चा) मान्ने अवस्थामा थिएनौं । बनोटमा हेरफेर गरेमा सात प्रदेशमा पनि जान सकिन्छ । ८ मा पनि जान सकिन्छ । त्यसैले मैले 'संघीयताको संख्या ६ देखि ९ प्रदेश रहने छ' भन्ने उल्लेख गरेर जाऔं भनें । नाम प्रदेश सभालाई राख्न दिने प्रस्ताव गरें । एक डेढ महिनाभित्र सहमति भएका विषयमा मस्यौदा पनि हुँदै जान्छ र संघीयताको संख्या र विवादित सीमांकनको विषय टुंग्याऔं भन्ने प्रस्ताव गरें ।
सत्तपाक्षले 'हामीले यस्तो प्रस्ताव आउला भनेर सोचेका थिएनौं । विजयजीले ल्याएको प्रस्ताव राम्रै हो' भन्नुभयो र सकारात्मक रूपमा लिनुभयो । बैठकमा प्रचण्डजीले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुभयो । चार पक्षबीचमा सहमति नै बनेर उठेको हो । बैठकमा उपेन्द्रजी पनि हुुनुहुन्थ्यो । पछि छलफल गर्न १९ दलको मोर्चामा गएपछि मधेसी र आदिवासी जनजातिका नेता साथीहरूले हामीले केही नपाउने भयौं, यो प्रस्ताव मान्य हुँदैन भन्नुभयो । मधेसकै केही साथीहरूले चर्को कुरा उठाएपछि प्रचण्डजी फेरि अघि बढ्न सक्नुभएन ।
हो, संविधान नबनोस् भन्ने 'फ्याक्टर' बाहिर पनि छ । प्रत्येक पार्टीमा हार्डलाइनर फ्याक्टर छ । तिनीहरू संविधान तत्काल नबनोस् भनेर लागेका छन् । मधेसी पार्टीमा पनि कतिपय नेता माघ ८ मै संविधान जारी गराउने पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो । चाहनुभएको थिएन । माघ ८ अघि सहमति नहोस् र सहमतिले संविधान नबनोस् भनेर चाहने तत्त्व प्रत्येक पार्टीभित्र भएको मैले प्रस्टसँग देखेको थिएँ । कांग्रेसभित्रै एकथरी साथीहरू अहिलेको नेतृत्वमा -सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले) संविधान जारी होस् भनेर चाहिरहनुभएको थिएन । यो मैले राम्ररी बुझेर नै भनिरहेको छु । माघ ८ गते सहमति नभएपछि आउने परिस्थितिमा संघर्ष हो, आन्दोलन हो । मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ । त्यहाँबाट जे हुन्छ- हुन्छ भन्ने सोचेर बसेका थिए नेताहरू । यी सबै बुझेर नै सहमतिमा लैजानका लागि मैले त्यस्तो मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएको हो । पूर्वका तीन र पश्चिमका २ वटा गरी पाँचवटा जिल्लाको विवाद तुरुन्त मिल्नेवाला थिएन । त्यसैले त्यसलाई डेढ महिनामा मिलाउने गरी प्रस्ताव गरेको थिएँ ।
प्रकाशित मिति: २०७१ माघ १८
माघ ८ मा संविधान नआउनुमा मुख्य जिम्मेवार कसलाई ठान्नु हुन्छ ?
संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ
माओवादी मधेशवादी मोर्चा